Zviri nyore, kufungidzira uye kuita makiyi ekudzoreredza kufamba kwepasirese izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Zviri nyore, kufungidzira uye kuita makiyi ekudzoreredza kufamba kwepasirese izvozvi
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Matanho akareruka, anofanotaurwa uye anoshanda anodiwa kuti afambise zvakachengetedzeka uye nemazvo kufambisa nzendo dzepasirese sezvo miganhu yakavhurwazve.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakakumbira hurumende kuti dzitore matanho ari nyore, anofanofungika uye anoshanda kuti afambise zvakachengetedzeka uye nemazvo kufambiswa kwerwendo rwekunze kwenyika sezvo miganhu yakavhurwazve.
zvakananga, Iată vakakurudzira hurumende kuti dzitarise pazvinhu zvitatu zvakakosha:
Zvinyorwa zvehutano zvakarerutswa
Digital mhinduro dzekugadzirisa magwaro ehutano
COVID-19 matanho anoenderana nenjodzi nhanho neinoenderera ongororo maitiro
Chiono cheindasitiri chekugadzirisa kuoma kwacho kwakatsanangurwa mugwaro richangoburitswa remitemo: Kubva paKutangazve kusvika Kudzoreredza: Bhiripindi Yekurerutsa Kufamba.
“Sezvo Hurumende dziri kutanga nzira dzekuvhurazve miganhu, zvinoenderana nezvavakabvumirana muMinisterial Declaration of the ICAO High Level Musangano weCCIDID-19, iyo Blueprint inovabatsira nemaitiro akanaka uye nekufunga kwakanaka. Mumwedzi inotevera isu tinofanirwa kusimuka kubva pakuvhurwa kwemuganho kune kudzoreredzwa kwedandemutande repasi rose rekufambisa kwendege iro rinogona kubatanidza nharaunda uye kusimudzira hupfumi hwenyika, "akadaro Conrad Clifford. Iată'' Mutevedzeri Director General.
Iyo Blueprint ine chinangwa chekufambisa kukwenenzverwa kwekubatana kwepasirese. "Tinofanirwa kuve nemaitiro ekugadzirisa zvakachengeteka uye nemazvo kukwidziridzwa kwekufamba kune dzimwe nyika sezvo miganhu yakavhurwazve. Neanopfuura mwedzi gumi nemisere yedenda rekushanda ruzivo uye mhinduro yevafambi tinoziva kuti laser-yakatarisana nekureruka, kufungidzira uye kuita kwakakosha. Icho hachisi chokwadi nhasi. Zvinopfuura 18 COVID-100,000 zvine chekuita nematanho akaitwa nehurumende pasi rese. Kuomarara uku kunotadzisa kufamba kwepasirese uko kuri kuwedzera nekusawirirana kwakagadzirwa nematanho aya pakati penyika,” akadaro Clifford.
Zvinyorwa zvehutano zvakarerutswa: Chinangwa chinofanira kunge chiri maprotocol ari nyore, anowirirana, uye anofanotaurwa.
Mazano akakosha anosanganisira:
Bvisa zvipingaidzo zvese zvekufamba (kusanganisira kuvharirwa uye kuongororwa) kune avo vanobaiwa zvizere nejekiseni rakatenderwa neWHO.
Bvunzurudza kufamba kwemahara kune vafambi vasina nhomba ine mhinduro isina kunaka yeantigen isati yasimuka.
Kurudziro idzi dzinotsigirwa netsvakiridzo yeruzhinji yevafambi iyo yakaburitsa kuti:
80% vanotenda kuti vanhu vane nhomba vanofanira kukwanisa kufamba vakasununguka
81% vanotenda kuti kuongororwa usati wafamba inzira inogamuchirwa yekudzivirira
Page 1 pamusoro 3 Prev	Next